New Moto E4: Nka na ụzụ nkọwapụta, ọnụahịa na isi akụkọ | Gam akporosis
Motorola mechara tọhapụ ndị ọgbọ nke anọ nke ngwaọrụ na mpaghara Moto E. Moto E na Moto E4 Plus ohuru bu ngwaọrụ di nma ma ha bu n’obi iji dọta ndi oru n’ime otutu ihe di egwu.
Na nke a, anyị ga-ekwu maka ụdị dị ala nke ọkwa ọhụrụ, Moto E4, gafere ya Nka na ụzụ nkọwa na nkọwa gbasara ego na nnweta. Na mgbakwunye, na ngalaba dị n'okpuru ebe ị ga-ahụkwa a Comparison table na ihe nlereanya nke ọgbọ gara aga, Moto E3.
1 Moto E4 ọrụaka nkọwa
2 Moto E4 na Moto E3 - Isi iche
3 Tụnyere - Moto E4 vs Moto E3
4 Moto E4 ọnụahịa na nnweta
Moto E4 ọrụaka nkọwa
The Moto E4 na-anọchite anya nnukwu nkwalite site n'ọgbọ gara aga, na atụmatụ ya yiri nke Moto G5. Ọhụrụ smartphone nwere a aluminom chassis, a mkpisiaka agụ na Home button na a HD ngosi nke 5 sentimita na mkpebi nke Pikselụ 1280 x 720.
N'aka nke ọzọ, Moto E4 na-akwado ya na nhazi ya Snapdragon 425 ma ọ bụ 427 (quad isi na 1.4GHz) ma tinye 2GB nke Ram na 16 GB nke ohere maka nchekwa data (gbasaa site na kaadị microSD).
N'otu aka ahụ, na mobile na-eweta a 8 megapixel n'azụ igwefoto nwere autofocus na oghere F / 2.2, mgbe igwefoto n'ihu nwere mkpebi nke 5 megapixels na oghere nke F / 2.2.
N'aka nke ọzọ, ọnụ ya nwere ihe mkpuchi mmiri nano, batrị 2800mAh na ụlọ ọrụ nrụpụta gam akporo 7.1 sistemụ arụmọrụ. Ọ ga-adị na abụọ dara agba, isi awọ na gold.
Ihuenyo 5 sentimita
Mkpebi HD (1280 x 720 pikselụ)
Nhazi Qualcomm Snapdragon 425 ma ọ bụ 427 Quad Core 1.4 GHz
Nchekwa 16 GB
Ndị kamera 8 megapixel F / 2.2 n'azụ - 5 MPx n'ihu
ndị ọzọ Onye na-agụ mkpịsị mkpịsị aka
Akụkụ X x 144.5 72 9.3 mm
Ụbọchị ntọhapụ June 2017
Ọnụahịa gọọmentị Euro 149 ma ọ bụ 129.99 dollar
Moto E4 na Moto E3 - Isi iche
Nnukwu ọdịiche dị n'etiti Moto E4 na E3 bụ ma eleghị anya na nhazi nke ọnụ, ebe ọ bụ na ọgbọ gara aga nwere chassis plastik, dika Moto G4 na G4 Plus. Ihe bụ ihe ọzọ, Moto E3 enweghịkwa akara mkpisiaka na nhazi ya bụ 1GHz quad-core MediaTek, ebe RAM nwere 1GB.
N'aka nke ọzọ, Moto E3 nwere sistemụ arụmọrụ Android 6.0 Marshmallow, ihuenyo 5-anụ ọhịa HD na mkpuchi Corning Gorilla Glass na 8MPx (isi) na 5MPx (n'ihu) ese foto, dịka Moto E4. Ọzọ anyị ga-ahapụrụ gị otu tebụl atụnyere n’etiti ọdụ abụọ a.
Tụnyere - Moto E4 vs Moto E3
Usoro njikwa Android 7.1 Nougat Android 6.0 Marshmallow
Ihuenyo 5 nke anụ ọhịa IPS LCD 5 nke anụ ọhịa IPS LCD
Mkpebi Pikselụ 1280 x 720 Pikselụ 1280 x 720
Nchedo Mmiri na-asọ oyi nano-mkpuchi Corning ozodimgba 3
Ndị kamera 8 Megapixels (f / 2.2) + 5 Mpx 8 Megapixels + 5 Mpx
Nhazi 425GHz quad-isi Snapdragon 427 ma ọ bụ 1.4 6735 GHz Quad isi MediaTek MT1P
Nchekwa 16GB 8GB
Nkwado MicroSD Ee (ihe ruru 128GB) Ee (Ruo 32GB)
Njikọ Wi-Fi 802.11 a / b / g / n + Bluetooth 4.2 + GPS nke A-GPS na GLONASS Wi-Fi 802.11 a / b / g / n + Bluetooth 4.0 + GPS nke A-GPS na GLONASS
Onye na-agụ mkpịsị mkpịsị aka Ee Mba
Akụkụ X x 144.5 72 9.3 mm X x 143.8 71.6 8.5 mm
Ibu ibu 150 grams 140 grams
Ụbọchị ntọhapụ June 2017 Julio 2016
Moto E4 ọnụahịa na nnweta
Moto E4 nwere ike zụta na ọnụahịa nke 149 euro ma ọ bụ $ 129,99 bido n’ọnwa a. Banyere ụlọ ahịa ahụ, enwere ike ịnweta ọnụ site na ụlọ ahịa ndị isi na ọtụtụ agba, gụnyere isi awọ na ọla edo.
N'oge a, Enwere ike idobe Moto E4 site na Amazon Spain.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Motorola » Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara Moto E4 ọhụrụ. Nka na ụzụ nkọwa na ọnụahịa
Nubia N2, nke mbụ